तपाई शुक्रकिटको हत्यारा हो ?
पूरा विश्वमा शुक्रकिटको क्वालिटी खस्कीरहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । जागिर, जिवनशैली तथा केही खास रसायनहरुको कारण शुक्रकिटको गुणस्तर र क्षमता घटिरहेको बताइएको छ । गुणस्तरमा गिरावट आएसँगै प्रजनन शक्तिमा कमी आउँछ ।
बिएमजे ओपनको रिपोर्ट अनुसार शुक्रकिटको गुणस्तरमा लगातार गिरावटको कारण २० प्रतिशत....
कुनै व्यक्तिको उदास, दुख्खी वा दिक्दारको अनुभव आफ्नो नियन्त्रणभन्दा पर पुग्छ, अर्थात् यस्तो अनुभव कम्तीमा पनि दुई सातासम्म पनि यस्तो अनुभवले नछाडेमा डिपे्रशन भएको हुन सक्छ ।
डिप्रेसन भएको व्यक्तिमा मानसिक, शारीरिक र सामाजिक असरस्वरूप यस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन् ।
–प्रायःजसो समय उदास,....
स्वास्थ्य समस्याको बारेमा बताउँछ कानेगुजीले
कानेगुजीले एमआरआई र एक्सरे नगरिकनै स्वास्थ्य समस्याका बारेमा बताइदिन्छ । त्यसैले यसलाई बेवास्ता नर्गनुस् ।
१. कानेगुजीले गर्दा कान असाध्यै चिलाउँछ र कान कन्याइरहनुहुन्छ भने तपाईंमा संक्रमण भएको हुन सक्छ ।
२. कानेगुजी बाक्लो, सुक्खा र कालो भयो भने तपाईं बूढो हुँदै जानुभएको....
एकैसाथ खान नहुने खानेकुरा
मानिस स्वादिला खानेकुराहरु खान रुचाउँछन् । स्वादिला खानेकुरा खाने क्रममा कुन खाना कतिबेला खाने, कुन खान नहुने सब भुल्ने गर्दछन् । यसरी खानेकुरामा ध्यान दिन नसक्दा सवास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । कुनै खानेकुरा अर्को खानेकुरासँग मिसाएर खानु घातक हुन्छ । मिसाएर खान नहुने खानेकुरा यस....
संघीय संरचनाअनुसार चार तहका अस्पताल हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सङ्घीय संरचनामा आधारित चार तहका अस्पताल रहने ब्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले बिहीबार पारित गरेको नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीयस्तरमा अस्पताल रहनेछन् । प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चारस्तरका अस्पताल रहने....
क्यान्सर हुनबाट बचाउने पाँच खानेकुरा
क्यान्सर एक खतरनाक रोग हो । जो कोहिलाई जुनसुकै बेला हुन सक्छ । खानपान, प्रदूषणको कारण क्यान्सर लाग्न सक्छ । यसबाट बच्नको लागि यी खानेकुराको दैनिक सेवन अति आवश्यक छ ।
१. ग्रीन टीः ग्रीन टीमा औषधिय गुण हुन्छ । यसमा यसमा पलिफेनाल्स र....
खाली पेटमा कागतीपानी पिउनुको फाइदा
कागती खानुका थुप्रै फाइदाहरु छन् । त्यसमाथि खालि पेटमा कागतीपानी पिउनु निकै फाइदाजनक हुन्छ । कागतीपानी पिउनुका फाइदाहरु यस प्रकार छन्ः
भिटामिन सीः शरीरका लागि भिटामिन सी जरूरी तत्त्व हो । यसले रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । बिहानको समयमा यसको सेवनले रोगप्रतिरोधक क्षमता राम्रो हुन्छ....
गर्मी बढे सँगै ठेउला र दादुराको प्रकोप सुरु
गौशाला । गर्मी बढेसँगै तराइका जिल्लामा विभिन्न रोगको प्रकोप सुरु हुन थालेको छ । महोत्तरीमा चर्को घामसँगै अत्याधिक गर्मीको कारण ठेउला र दादुरा रोगको प्रकोप सुरु भएको छ । बदलिँदो मौसमले ल्याएको हावाहुरी र प्रचण्ड घामका कारण हावापानी दूषित भएको कारणले रोगको प्रकोप बढ्न थालेको....
कुन रोगका बिरामीले खानु हुँदैन आँप
गर्मी महिनामा पाइने फल आँप बच्चादेखि बुढासम्म सबैले रुचाउछन् । आँप स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायीक मानिन्छ । तर, कतिपय रोग भएका मानिसहरुले आँप खानु उचीत हुँदैन । यस्तो रोग लागेमा आँप खानु हुँदैैन ।
डायबिटीजको समस्या भएका व्यक्तिहरुले आँप खानु हुँदैन....